Mana hidhaa: Aangaa’oonni Ol’aanoo Naannoo Oromiyaa Walgahii Dhimma Biyyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMana hidhaa: Aangaa’oonni Ol’aanoo Naannoo Oromiyaa Walgahii Dhimma Biyyaa
Mana hidhaa: Aangaa’oonni Ol’aanoo Naannoo Oromiyaa Walgahii Dhimma Biyyaa Ariifachiisaa Irra Jiraachuu Isaanii Ibsuun Manni Murtichaa Guyyaan Beellamaa Akka Jijjiiramuuf Mana Murtichaaf Xalayaa Barreessan!
RDH Mudde 19/2010
Aangaa’oonni Ol’aanoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa himatamtoota hooggantoota KFO galmee Gurmeessaa Ayyaanoo jala jiraniif ragummaa isaanii dhageessisuuf guyyaa hardhaatti Mana murtiitti argamuuf waadaa seenanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama.
Via: Kuraa Jaarsoo
Haa ta’u malee xalayaa koreen giddugaleessaa Mana murtiif barreesseen, aangaa’oonni Mootummaa Oromiyaa ol’aanoon kun, guyyaa hardhaa walgahii ariifachiisaa dhimma biyyaa irra waan jiraniif argamuu akka hin dandeenye ibsuun, manni murtichaa beellama biraa akka kennuuf akka gaafatame beekameera.
ሃገራዊ ስብሰባ wanni jedhamtu hin jirtu. Walgahii Koree Hoji Geggeessituu EPRDF geggeeffamaa jiru yoo tahe sun ሃገራዊ osoo hin taane ድርጅታዊ dha. Sun walgahii itti TPLF olaantummaa isii eegsifachuuf qabattee jirtu. OPDOn osoo akka afaaniin jettu ”Gooftaan isii ummata Oromoo miliyoona 50 ta’uu”tti amantee ballama m/murtii kana irraa hin haftu. Waamichi mana murtii sun waamicha hidhamtoota Oromoo haqa malee dararamaa jiraniiti. Waamichi hidhamtootaa sun waamicha ummata Oromoo milliyoona 50 ti. Ummata Oromoo guutuutu ni dhaqan moo ni hafu jedhee qalbiidhaan eegaa jira. OPDOn ummata jaratti amanuu jalqabe salphifte! Waamicha ummata bal’aa caalaa waamicha TPLFiif dursa kennuu isii ragaa kanaan baga argine!! Xalayaan kun qajeelfama TPLFiin akka katabame ifa galaa dha.
Yaadannoo:Caalaan barsiisaa Yunivarsiitii Wallaggaa ture. Deeggaraa (miseensa) KFO ture. Deeggaraa KFO Naqamteetti bahaa gala dhorkaa turan. Nagaan jiraachuu waan dhadhabeef bara 2011/12 Naqamtee gadhiisee Ambootti godaane. Caalaan nama uumurii isaa ol bilchina qabudha. Sabboonaa fi qabsoo Oromoof lubbuu kennuurraa duubatti nama hin jennedha.
Dr. Mararaa Guddinaa waliin walitti dhiyeenya jabaa qaba. Bakka Dr. Mararaan deeman mara waliin deemaa ture. Bara 2015 duula nu filadhaa KFOn geggeessaa ture Dr. Mararaa waliin baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa hunda qaxxaamuruun duula nu filadhaa geggeessaa ture. Yeroo sana hordoffii humnoota tikaa fi basaasa Wayyaanee hamaa jala jiraachusaa ni beeka ture. Anis beekan ture. Utuu kanaan jiruu Muddee 23, 2015 harka diinaa bu’e.
Daree barnootaa keessatti qabame. Erga qabanii booda Maa’ikelaawii geessan. Maa’ikelaawii keessaatti baatii hedduuf erga cafaqanii booda gara Qilinxootti dabarsan. Yeroo manni hidhaa Qilinxoo gubate mana hidhaa sana keessa ture. Gubachuu mana hidhaa Qilinxoo irraan kan ka’e gara Shawaa Roobit geessan. Mana hidhaa Shawaa Roobit keessaatti dararaa hamaa irratti raawwatan.
Dararaa hamaa irratti raawwatamerraa kan ka’e qaamni isaa laamsha’ee ture. Du’eera jedhanii mooraa mana hidhaa keessatti gatanii turan. Akka carraa ta’ee lubbuun keessaa hin baane ture. Lubbuun keessa jiraachuu erga baranii booda kutaa mana hidhaatti deebisan. Yeroo gabaabaa boodas Qilinxootti deebisan. Caalaan himatamaa Oromoota Amboo fi naannaa sanarraa qabaman 16 keessaa nama tokko. Hunduu ammayyuu Qilinxoo jiru. Barsiisaa Caalaa Shawaa Roobit irraa gara Qilnxootti erga deebisanii booda himannaa duraan irratti dhiyeessan malee himannaa haaraa gubachuu mana hidhaa Qilnxoo waliin walqabate irratti dhiyeessan. Hidhamtoota mana hidhaa Qilinxoo gubuun shakkamanii marsaa lammaffaa (marsaa jalqabaa warri himataman nama 38 turan) himataman 150 keessaa Caalaan nama tokko.
#Ethiopia – News update: #OPDO secretariat asks federal court new appointment date for its senior officials to appear as defense witnesses in high profile case – https://t.co/MtXpqgUaSl Case involves prominent opposition political leaders #GurmesaAyano, #BekeleGerba et.al pic.twitter.com/wW3HEkozDM
— Addis Standard (@addisstandard) December 28, 2017
Angawoonni Oromiyaa Ragaa Ittisaa Ta’uun Kamisa Dhiyaachuu